Новый год: Christmas-costumes.bis
မုတ်ဆိတ် Santa Claus ဓာတ်ပုံများ, ဖော်ပြချက်စျေးနှုန်း
အရေးတကြီး Santa Claus ရဲ့ဝတ်စုံကို Buy
အရေးတကြီးမုတ်ဆိတ် Santa Claus Buy
တစ်ဝတ်စုံကို Santa Claus အရည်အသွေးမြင့်မားဝယ်ဈေးသက်သာတဲ့, ကြီးသောအရည်အသွေးနှင့်မုတ်ဆိတ်နှင့်စျေးပေါ wigs ။ ဆက်စပ်ပစ္စည်းများခရစ်စမတ်ဝတ်စုံ - အိတ်နှင့် mittens Santa Claus, နှင်းအပျိုတံတွေးထွေး။ နှင့်သင်တစ်ဦးချင်းအရွယ်အစားသည်ခရစ္စမတ်ဝတ်စုံနှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းအမိန့်ပေးနိုင်သည်။
ထိုအမျိုးအစား၌ သာ. ခရစ္စမတ်ဝတ်စုံ
သင်မည်သည့်မေးခွန်းများကိုသို့မဟုတ်အကြံပြုချက်များရှိပါက atelielux@mail.ru mail ဒါမှမဟုတ်စာမကျြနှာတစျခုအပေါ်acomment ထားခဲ့ရေးလိုက်ကိုကျေးဇူးတင်ပါ, ငါသည်သင်တို့၏တောင်းဆိုချက်ကိုသို့မဟုတ်ကမ်းလှမ်းမှုကိုစဉ်းစားကြလိမ့်မည်။
ပြိုင်ပွဲ နှင့် ရောင်းချ
ရောင်းချခြင်း၏ rubric ခုနှစ်တွင်အနိမ့်စျေးလိုချင်သောနှင့်စိတ်ဝင်စားစရာအရာတို့ကို, အဝတ်အစား, သားမွေးခြင်းနှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းခြင်းကိုထုတ်ဖော်ပြသနိုင်ပါသည်။
ပြိုင်ပွဲ၏ rubric အတွက်အကြိတ်အနယ်ယှဉ်ပြိုင်ထုတ်ဝေလိမ့်မည်။ အခမဲ့ - ပြိုင်ပွဲမှာပါဝင်ပြိုင်ပွဲဝင်အားဖြင့်သင်တို့ကိုအဖိုးတန်ဆုအနိုင်ရဖို့အခွင့်အလမ်းရလိမ့်မည်!
လူတိုင်းသည်အဘိုးအို Frost ကနဲ့ Snow အပျိုတို့၏ဝတ်စုံအပေါ်အထူးလျှော့စျေးအပေါ်ရေတွက်နိုင်ပါတယ်။
အသီးအသီးကို Santa Claus နှင်းအပျိုဆိုက်ကနေပိုပြီး clients များရနိုင် - သူတို့ရဲ့ကြော်ငြာများနေရာအခမဲ့ ။
ကိုယ့်ကိုယ်ကိုခန့်ရေးထားသင် Santa Claus လိုအပ်သောသူတို့အားရည်ညွှန်းနိုင်ပါသည်သော site ၏လိုဂိုကို အသုံးပြု. သင်၏ဓါတ်ပုံများနှင့်ဗွီဒီယိုများအပေါ်သင်ဂုဏ်ယူပါတယ်ဝန်ဆောင်မှုနှင့် ပတ်သက်. ကျွန်တော်တို့ကိုပြောပြပါ။